काँग्रेस महाधिवेशन : कोभिडको कारण देखाएर पछाडि धकेल्दा वैधानिक हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? | शुभयुग
काँग्रेस महाधिवेशन : कोभिडको कारण देखाएर पछाडि धकेल्दा वैधानिक हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७८ श्रावण ३०, शनिबार (१० महिना अघि)
१४०२ पाठक संख्या
३० साउन,काठमाण्डौ – नेपालको पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसमा यतिबेला तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने वा नहुने अन्योलता छ । यदि, पछिल्लो तोकिएकै समयमा महाधिवेशन भएमा त्यो भदौ १६ हो । तर, महाधिवेशनका लागि एक महिनाभन्दा कम समय रहेको र पार्टीका आन्तरिक विवादहरू समाधान नभएकाले उक्त मितिमा महाधिवेशन हुनेमा नेताहरू विश्वस्त देखिँदैनन् । भर्खरै सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको कांग्रेसमा दोस्रो र तेस्रो पुस्ता पार्टीको नेतृत्व लिन आतुर देखिएका छन् भने पुरानो पुस्ता आफ्नो वागडोर छोड्ने अवस्थामा छैन । यसै सेरोफेरोमा कांग्रेस नेता धनराज गुरुङसँग गरिएको संवादको संपादित अंश :
यसबारेमा पनि केही गर्न सकिनेछ । जस्तो भदौको १६ बाट वडा तहको अधिवेशन सुरु गरेर गाउँ, नगर हुँदै भदौ २२ – २३ सम्म प्रदेशसभा, भदौको २६ तिर संघीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला अनि असोजको ३–४ तिर प्रदेश अधिवेशन र असोजको अन्त्यमा महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । यस प्रकारका सेडुलको बारेमा पनि छलफल हुँदै छ । त्यसो भयो भने, हामीलाई भदौ महिनामा नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दायीत्व संविधानअनुसार थियो । त्यसैअनुसार भदौबाट सुरु गर्दा अहिले तोकिएकै मितिलाई टेकेको देखिन्छ । यसले महाधिवेशनका प्रक्रिया सुरु भएको मानिने र महाधिवेशनको वैधानिकताको प्रश्न पनि टरेर जानेछ ।
अर्कोतर्फ कोभिड – १९ का कारण मुलुकमा पटकपटक लकडाउन भयो अघिल्लो वर्ष र अहिले गरी करिब ६ महिना मुलुक लकडाउनमा पर्यो यसले पनि हामीले कहीँ न कहीँ स्पेस पाउँछौँ कि भन्ने लागेको छ । सारा मुलुक नै ठप्प भएका कारण हामीले महाधिवेशनको गतिविधि अगाडि बढाउन नसक्नु यो पनि कारण हो । क्रियाशील सदस्यता वितरण, स्थानीय तहको अधिवेशन जस्ता काममा हामीलाई कोभिडले पनि प्रभाव पारेको हो । यसलाई पनि केही आधार मान्न सकिन्छ ।
समस्या आन्तरिक नै हो । यसमा धेरै व्याख्या गर्नु परेन । किनभने, चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानमा छ । पहिला नै गर्नुपर्ने समयमा गरिएको भए न नेपालमा कोभिड आएको थियो न लकडाउन थियो । त्यसैले महाधिवेशन समयमा नै नहुनु भनेको हाम्रो अकर्मण्यता नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले विधानबमोजिम महाधिवेशन गर्न चाहेनाैं र संविधानले दिएको एक वर्ष थप्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्थालाई पनि सही रूपमा लिन सकेनौँ । विधानमा महाधिवेशन सार्न मुलुकमा संकटकाल वा महामारी चलेको हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, यी सबै कुरा नभएर पनि हामीले समयमा महाधिवेशन गर्न सकनौँ ।
त्यतिबेला हामीले भनेको हो महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ । तर, केही नेतालाई लाग्यो होला समय थपेर पनि चलाउन पाइन्छ भन्ने, यही बीचमा कोभिड आयो । कोभिडका कारणभन्दा पनि आन्तरिक कारणले समयमा नै पार्टीको महाधिवेशन हुन नसकेको हो । अहिले कोभिड थप कारण बनेको छ ।
महाधिवेशनपछि पहिलो कुरा पार्टीभित्र न्यायोचित न्याय प्रणाली स्थापित गरिनेछ । पार्टीमा कसैले दजनौँपटक अवसर पाउने, कसैले एकपटक पनि अवसर नपाउने, सँगै जेल बसेको मान्छे पटकपटक मन्त्री हुने, अर्को सँगै जेल बसेको उत्तिकै क्षमता भएको मान्छेले सांसद पनि हुन नपाउने । अत्यन्तै असक्षम मान्छे जो एकदिन पनि संसद्मा जनताका कुरा बोल्न सक्दैन त्यस्ताले पनि दौरा र सारीको फुर्को समातेको भरमा पटकपटक अवसर पाउने गरेका छन् ।
यस्ता कार्यले पार्टीभित्र ठूलो विभेद छ यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ । पार्टीमा नयाँ पुराना, योग्यता क्षमता र भूमिकाका आधारमा अवसर दिनुपर्छ यो प्रकारको न्यायोचित व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसपछि मुलुकलाई प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्दै लानुपर्छ । हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ । पहिलो कुरा सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको सुरुआत गरी हाल्नुपर्छ । जुनसुकै पार्टीको भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ । हामी त्यसका लागि निरन्तर दबाब दिन्छौँ । महाधिवेशनपछि पनि हाम्रो सरकार भए यी काम गर्छौं अरूको सरकार भए दबाब दिन्छौँ र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लगाउँछौँ । भ्रष्टाचारकै कारण जनताले सुशासन पाएका छैनन जबसम्म सुशासन हुँदैन, तबसम्म समृद्धि आउँदैन । समृद्धि नआइ नेपाल अघि बढ्दैन । त्यसैले हाम्रो ध्यान त्यता केन्द्रित छ ।
यसमा केही सत्यता छ । तर, हामीले पार्टीमा यसबारेमा पटकपटक कुरा उठायौँ । तत्कालीन सरकारले यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा उठेका प्रश्नदेखि कोभिडका कारण जनताले खेप्नुपरेको सास्तीका बारेमा पार्टीले बोल्नुप¥यो आन्दोलन गरौँ भन्यौँ । यस्तो कोभिडका बेला कहाँ आन्दोलन गर्ने भन्दै टार्ने काम भयो । त्यसोभए सत्याग्रह गरौँ सभापति, पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य बसन्तपुरमा सत्याग्रहमा बसौँ र प्राथमिकतामा आधारमा सरकारलाई दबाब दिऔँ । यसको असर जिल्ला जिल्लामा पनि पर्छ जिल्लामा पनि सुरु हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरेको हो । तर, हिजो केन्द्रीय समितिमा हाम्रा कुरा सुनिएन । अब म के कुरामा ढुक्क छु भने आउने महाधिवेशनपछि हामी आपै पदाधिकारी हुनेछौँ ।
हाम्रो एजेन्डा लागू गर्नेछाँै । हाम्रा एजेन्डामा महाधिवेशनमा आउने धेरै प्रतिनिधिले साथ दिनेछन् । पार्टीमा भ्रष्टाचारमा लागेका गन्हाएकालाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने छैन भन्ने लागेको छ । अबको कांग्रेसको नेतृत्व भ्रष्टाचारका विरुद्ध लाग्नेले लिनेछ र त्यसले मुलुकलाई तरंगित गर्दै लैजानेछ । नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नेछ ।